Arendrina taratasy | mandimby maharo
Arendrina taratasy	Posted on 30 June 2012 by Mandimby Maharo	Mimenomenona ny mpivarotra sy ireo mpanao asatanana malagasy fa resin’ny entana sinoa. Nandritry ny fankalazana ny faha-52 taona ‘ny fahaleovantenan’i Madagasikara ohatra dia zara raha nisy nanontany ireny arendrina taratasy vita teto an-toerana ireny. Tany amin’ny jiro sy arendrina plastika vita avy any sinà avokoa no nanintona ny olona. Mety mitovy ihany aloha ny fahatezany saingy tsy mahaleo ireo ny arendrina gasy.
Manintona ny olona ny vita sinoa satria mahafatifaty sy manaraka ny toetrandro.Eo aloha ny fisian’ny kisarisary maro loko. Eo koa ny jiro maro loko marevaka aminy. ankoatr’izay ny endriny: sary trondro, fiara, voninkazo… Mazava ho azy fa dia mahasarika ny ankizy ireny. Ny ankizy izay manana ny anjara andraikiny amin’ny fifidianana izay arendrina ho vidiana. Ka izay mahasarika ny masony ihany no tiany.
Etsy andaniny ireo arendrina taratasy malagasy dia toa vasoka tanteraka. Mbola ilay tari-by sy ilay jiro labozia hatrany. Ilay endrik’arendrina tamin’ny taona 80 ihany no mbola endriny ankehitriny. Mbola ilay labozia mandoro ilay taratasy raha sendra voadona ihany no ao anatiny. Hany ka na ny hividy azy aza toa mahamenatra . Sao ho lazain’ny olona fa tsy maharaka ny fivoarana.
Tsy tokony himenomenona nefa isika raha tsy mahasarika ny olona ny asatanantsika. Tsara izy ireny saingy tsy misy mpividy. Ny tena marina tsy haintsika ny misarika ny mpividy. Tsy mbola ao anatin’ny fomba fisainana malagasy mihintsy ilay fahaiza-mivarotra. Raha haitsika koa ny mampivady ny asa-tanatsika amin’ny fivoaran’ny teknika sy teknolojia dia ho mora amidy izy ireny. Ny arendrina tokoa anie ka kolontsaina sinoa no nalain’izao tontolo izao tahaka . Ka na ry zareo topony ary manova azy hanaraka ny fivoarana koa maninona moa isika izay naka no tsy afaka ny hanova ilay arendrina taratasy fahagola ho arendrian taratasy maoderina.
ekena koa nefa fa ilaina ny mampianatra ny ankisy hitia sy hividy ny vita malagasy. saingy ho sarotra ihany ny handresy lahatra azy ireny hifidy zavatra tsy manaitra azy noho ny hafa. Raha misy tokoa araka izany ny tena hambom-pom-pirenena dia aoka mba hitondra any amin’ny fanavaozana sy ny tsara izany. Fa tsy sanatria haampihemotra antsika indray ka handihizan’ny sinoa eto hatrany ny firenentsika.
Tags: arendrina, Malagasy, sinoaCategories: Uncategorized